Ambassador Mahamat Saleh Annadif oo baaq u diray Qurba-joogta Soomaaliyeed – idalenews.com
Danjiraha Midowga Afrika u qaabilsan Arrimaha Somalia,Mahamat Saleh Annadif ayaa waxa uu Qurba-joogta ugu baaqay inay dib-u-dhistaan Dalkooda.
Wuxuu sheegay in Qurba-joogta looga baahan yahay inay ka qeyb-qaataan Baaqyadda ay Dowladda Somalia u direyso, isagoona sheegay in Dal waliba uu dhiso dadkiisa, haddii Arintaa la waayana uu dilka dib-u-dhacyo kala duwan la kulmaayo, sida uu hadalka u dhigay.
Mahamat Saleh Annadif, xilli uu hadal ka jeedinayay kulan ay qaban-qaabisay AMISOM oo jaaliyadda Soomaalida ee London ay ka qeybgashay, ayaa waxa uu ku sheegay in Somalia ay iminka u gudbeyso Marxalad kale, loona baahan yahay in laga faa’iideysto Fursadaha iyo Kheyraadka Somalia.
Annadif ayaa sheegay in horumar dhinacyo badan ah ay ka jiraan gudaha Soomaaliya, isla markaana loo baahan yahay in qurba-joogta ay gacan xoog leh ka gaysato horumarinta dalka.
“Kulankan waxaa loogu talagalay in lagu ogaado dhinacyo macquul ah oo ay kuwa ku nool qurbaha gacan kaga gaysan karaan siyaasadda horumaraysa iyo xaaladda amni ee Soomaaliya. Horumar badan ayaa ka jira dalka, waxaana laydinkaga baahan yahay inaad gacan ka gaysataan. Waxaan sidaas darted idinka filaynaa wax badan.” Ayuu yiri Annadif.
Cali Caamir oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa AMISOM ku ammaanay doorka ay ka qaadatay xasilinta Soomaaliya, isagoo xusay in degenaanshaha hadda jira uu yahay natiijada dedaal dheeri ah oo ay ciidamada qaran ee Soomaaliya iyo AMISOM iska kaashadeey, iyagoo gacan ka helaya Beesha Caalamka.
(DAAWO VIDEO+SAWIRADDA). Wasiirka arimaha dibada ee dalka Burkina Faso oo marqura Jooga ka dhacay Xili ay Shir Jaraa’id wada qabanaayen Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dalka Turkiga